एजेन्सी। बलिउड नायक सुशान्तसिंह राजपूतको मृत्युपछि वलिउड लागुपदार्थ सेवनलाई लिएर विवादमा तानिएको छ।
सारा अलिखान, दीपिका पादुकोण, अर्जुन रामपाल हुँदै अहिले लागुपदार्थ सेवनको घटना कमेडियन भारती सिंह र उनको पति हर्ष लिम्बाचियासम्म जोडिन पुगेको छ।
लागुपदार्थ सेवनको आरोपमा नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो (एनसीबी)ले शनिबार भारती र आइतबार उनको पति हर्षलाई पक्राउ गरेको थियो। भारती र हर्ष पक्राउ परेपछि बलिउडमा कमेडियनले विभिन्न प्रतिक्रिया जनाएका छन्।
बलिउडका चर्चित कमेडियन जोनी लीवरले दुवै जनालाई सञ्जय दत्तको उदाहरण दिँदै गल्ती स्वीकार्न सल्लाह दिएका छन्।
“दुवै जना बाहिर आएपछि आफ्ना साथीहरूसँग कुरा गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई यसको सेवन नगर्न सल्लाह दिनुपर्छ,” जोनी लीवरले भनेका छन्, “सञ्जय दत्तलाई हेर, उनले संसारको अगाडि आफ्नो गल्ती स्वीकार गरे। यो भन्दा ठूलो उदाहरण अरू के चाहियो। आफ्नो गल्ती स्वीकार र लागुपदार्थ सेवन नगर्ने संकल्प गर।”
जोनी लीवरले आपूmले पनि रक्सी सेवन गर्ने बानी छोडेको बताएका छन्। रक्सीले हानि गर्छ भन्ने बुझेपछि रक्सी सेवन गर्न छोडेको उनले बताएका छन्। रक्सीले आफ्नो क्षमता र सिर्जनाशीलतामा नराम्रो असर गरेको उनले स्वीकारेका छन्।
बलिउड अभिनेता शेखर सुमनले मानिसको खुबीमा ड्रग्स हुनुपर्ने बताएका छन्। सुमनले जीवनमा कहिले काहीँ पैसा र फेमलाई सम्हाल्न नसक्दा अप्ठेरो अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने जनाए।
“स्टेजमा प्रस्तुति दिँदा अन्य चिज (लागुपदार्थ)को सहारा लिनुहुन्छ भने त्यसो नगर्नुहोस्। स्टेजमा आफ्नो खुबी र क्षमताको बलमा उभिनोस्,” सुमनले भनेका छन्।
भारती र हर्ष लागुपदार्थ सेवनको आरोपमा पक्राउ पर्दा वलिउडका अन्य कमेडेयिनहरूमा कुनै असर नपर्ने सुमनले बताएका छन्। “हास्य क्षेत्र यस्तो ताल हो जुन एउटा माछाको कारण दुर्गन्धित हुँदेन,” उनले भनेका छन्।
कमेडियन राजु श्रीवास्तव र सुनिल पालले भारती र हर्ष पक्राउको खबरले आपूmलाई आश्चर्यमा पारेको बताएका छन्। उक्त समाचारले आपूmहरू निराश बनेकोसमेत उनहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्। राजु र सुनिलले सबै जना कमेडियनलाई एउटै नजरले नहेर्न पनि अनुरोध गरेका छन्।
अदालतले कमेडियन भारती र उनको पतिलाई १४ दिन न्यायिक हिरासतमा पठायो
“पक्राउको समाचार सुन्दा म आश्चर्यमा परेँ। मैले भारतीलाई केही नहुँदादेखि सफल हुँदासम्म देखेको छु। उनी आफ्नै कामका कारण चर्चित बनेकी थिइन्,” सुनिलले भनेका छन्।
धेरै जनाको नाम लागुपदार्थ सेवनसँग जोडिए पनि उनीहरू सबै दोषी नभएको तर्क सुनिलले राखेका छन्।
“के भारती र उनको पति यस्तो गर्न सक्छन्? मेरो मन यो मान्न तयार छैन। लागुपदार्थ सेवन गरेर राम्रो कमेडियन बन्न सकिँदैन। लागुपदार्थले ऊर्जा दिँदैन। उनीहरू पक्राउ परेको सुन्दा मलाई नरमाइलो लागेको छ। म भन्छु- भारती त्यस्तो छैनन्। उनी राम्रो कलाकार हुन्। तर, उनी त पक्राउ परेकी छन्। उनले लागुपदार्थ सेवन गरेको स्वकारेकी छन् रे! यो सबै के भइरहेको छ मैले बुझ्न सकेको छैन। हाम्रो फिल्म उद्योग कता जाँदै छ?,” राजुले प्रश्न गरेका छन्।
प्रकाशित: सोमबार, मंसिर ८, २०७७ ११:३७
“सञ्जय दत्तलाई हेर, उनले संसारको अगाडि आफ्नो गल्ती स्वीकार गरे। यो भन्दा ठूलो उदाहरण अरू के चाहियो। आफ्नो गल्ती स्वीकार र लागुपदार्थ सेवन नगर्ने संकल्प गर।”
“स्टेजमा प्रस्तुति दिँदा अन्य चिज (लागुपदार्थ)को सहारा लिनुहुन्छ भने त्यसो नगर्नुहोस्। स्टेजमा आफ्नो खुबी र क्षमताको बलमा उभिनोस्।”
“उनीहरू पक्राउ परेको सुन्दा मलाई नरमाइलो लागेको छ। म भन्छु- भारती त्यस्तो छैनन्। उनी राम्रो कलाकार हुन्। तर, उनी त पक्राउ परेकी छन्। उनले लागुपदार्थ सेवन गरेको स्वीकारेकी छन् रे!”